जाेत्नेदेखि राेप्नेसम्मकाे जिम्मा महिलालाई
नेपालगन्ज, असार १९ । कचनापुर–७ टिकुलीपुर बाँकेकी ह्रदयकली बि.क.ले खेतमा हलो जत्ने मान्छे नपाएपछि यसवर्ष आफै जोतिन् । श्रीमान रोजगारीको लागि भारतमा रहेकोले उनी एक्लैले खेतीपातीको काम सम्हाल्नु परेको छ ।
सांकेतिक भाषा सिक्दै महिला
नेपालगन्ज, असार १८ । बाँके चिसापानीकी शान्ता बुढा विहान ८ देखि १० बजेसम्म सांकेतिक भाषा सिक्न व्यस्त हुन्छिन् । सांकेतिक भाषा पढाउने शिक्षिका रहेकी बुढा रहनुभएकी बुढाले भाषालाई अझै तिखार्न पुर्नताजगी तालिम लिईरहेकी छिन् ।
बाल इजलास स्थापना
म्याग्दी, असार १७ । जिल्ला अदालत म्याग्दीमा बाल इजलास स्थापना भएको छ । बालबालिकाको न्यायमा सहज पहुँच बढाउन बालमैत्री कक्ष र इजलास स्थापना गरिएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका श्रेस्तेदार गोकर्णराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
राजनीतिक दलका महिला भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा
चितवन, असार १७ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले गत वैशाखमा गएको भूकम्पपछि महिलामाथि हिंसा बढेको भन्दै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अनुगमन शुरू गरेको छ । अनुगमनका लागि चितवन आउनुभएका सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले चितवनलाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर मानव वेचविखन तथा ओसारपसारका घटनाहरू हुने गरेको र भूकम्प प्रभावित महिलाको सुरक्षा राज्यले दिन नसकेको बताउनु भयो ।
विश्व खेलकुद पत्रकार दिवसमा पौडी प्रतियोगिता
विश्व खेलकुद पत्रकार दिवसमा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार महिला बिचको पौडी प्रतियोगितामा कालिका एफ. एम.की गीता कुमाल प्रथम, क्रिष्टल टि.भीकी संगीता आर्चाय दोस्रो र सिनर्जी एफ.एम.की मनिषा श्रेष्ठ तेस्रो भएका छन् । प्रतियोगितामा आठ जना पत्रकार महिलाले भाग लिएका थिए
मानव बेचबिखनविरुद्ध नेपाल—भारत इन्डो सञ्जाल निर्माण
नेपालगन्ज, असार १७। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रबाट हुनसक्ने मानव बेचबिखनलाई रोक्न सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय संघ संस्था र सुरक्षा निकायको सहभागितामा अन्तरदेशिय इन्डो नेपाल सञ्जाल निर्माण गरिएको छ। बेचबिखन तथा श्रम शोषणमा परेका बालबालिका र महिलाको उद्धारका लागि सञ्जाल निर्माण गरिएको हो।
रोटरी इन्टरनेशनल अवार्डबाट पत्रकार महिला पुरस्कृत
महिला खबर काठमाडौं, असार १६ गते । रोटरी इन्टरनेशनल डिस्टिक ३२९२ ले रोटरी जर्नल अवार्ड २०१५ बाट दुई जना पत्रकार महिला सहित विभिन्न विधाका ६ जना क्रियाशील पत्रकारलाई पुरस्कृत गरेको छ । पुरस्कृत हुनेमा महिलामा गोरखापत्रका फोटो पत्रकार कविता थापा, स्वास्थ्यमा समाचारपत्र दैनिकका भगवती तिमिल्सना,शिक्षामा राससका प्रकाश सिलवाल, आर्थिकमा कारोवार दैनिकका सञ्जय न्यौपाने, वातावरणमा नविन लुइटेल […]
सुस्त मनस्थिती भएकी बालिका बलात्कृत
लमजुङ, असार १६ । लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाकी १४ बर्षिया सुस्त मनोस्थिती भएकी बालिका बलात्कार गर्ने अभियुक्तलाई थप अनुसन्धानका लागि अदालतले एक हप्ता म्याद थप गरेको छ ।
बाबुराम भट्टराईद्वारा अधिकारका लागि प्रतिवाद गर्न महिलालाई आव्हान
काठमाडौं, असार १५ । राजनीतिक सहमति तथा संवाद सहमतिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले महिलालगायत अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार खोस्ने र कटौती गर्ने अधिकार संविधान मस्यौदा समितिलाई नभएको बताउनु भएको छ ।
अझै छन् कमलरी
नेपालगन्ज, असार १५। राज्यले उचित पहल नगर्दा कमलरी मुुक्ति अभियान पूर्णरुपमा सफल हुन नसकेको अभियानकर्मीले जनाएका छन्। पूर्व कमलरीको संस्था मुक्त कमलरी मञ्चले कम्लरी मुक्ति अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।
« Previous 1 … 349 350 351 352 353 … 358 Next »